PicSay Pro 1.8.0.5 ngwa - Download Free Premium Apk
Spice up the pictures on your phone with this award winning photo editor. Sharpen, wepu red anya, akuku & agbatịnụ, ịgwagbu, fanye cutouts nke ọzọ foto, agba, ka agba ikwommiri nke nwa-na-na-acha ọcha foto, tinye ederede, okwu balloons, itinye mmetụta dị Cross Usoro, Lomo, Vignette, faux HDR, Tilt-nnofega, pensụl osise, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Na-akwado elu mkpebi edezi ruo 13MP maka ngwaọrụ na ike ijikwa ọ. Nke a bụ mgbe mbụ ngwa m awụnyere na ọhụrụ na ngwaọrụ. Ọ bụ ihe kasị mma foto mkpachapụ ngwa si n'ebe. The Mmepụta mgbe niile na-aza gbara ajụjụ. I nwere ike ime echiche egosipụta ama.
Ọzọkwa ịbanye multiple e nke ederede. Họrọ “aha”, pịnye ụfọdụ ederede. wee pịa “laghachi”. Pịnye ụfọdụ ọzọ ederede. hey Presto, nke abụọ akara nke ederede na-egosi n'okpuru mbụ. dị nnọọ pịa “laghachi” mgbe ọ bụla akara. I nwekwara ike ịgbanwe ndị size nke akara ohere. Kpọmkwem otu dị ka na-amalite a ọhụrụ paragraf ọ bụla ederede nchịkọta akụkọ. Lee? Nke abụọ kasị mma ngwa niile oge.
Ọ bụrụ na ị chọrọ a oké edezi na omume nke bụ ihe dị mfe ma dị mfe iji, na-a ngwa. M DỊGHỊ ịzụta apps ma m zụtara a otu mgbe na-agbalị na-free version nke jọgburu onwe ya, n'eziokwu. The ụgwọ mbipute bụ egwu!! Ọ na-akwụ ụgwọ maka onwe ya a ugboro nde n'ime oké foto na nza nke achia ochi, oke. Otu oge ugwo, dịghị mgbasa ozi, ọ bụ naanị $3.99 na uru ọ bụla penny.
Afterglow Photo Filter Pro 1.0 N'ihi na Mac Torrent
Copyright © 2018 CracksLive — e site WPZOOM